Kedu ihe bụ tankị subsea valve
A na-akpọkwa tankị subsea valves, pneumatic subsea valves, valves mberede, na mberede mechie-apụ valves. Ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ihe ọghọm ọsọ ọsọ na ọdụ nchebe nke ụgbọ ala ngwongwo dị egwu na China na 2014, ngalaba steeti dị mkpa emeela ka ndị nlekọta ...
Kedu ihe m kwesịrị ị paya ntị na mgbe ụgbọ mmiri ahụ na-agba ụgbọ mmiri?
site ha na 20-06-02
1. Tupu ọrụ steamer, a ga-ewepụ ihe mgbochi mgbochi mmiri. Mgbe arụchara ọrụ steamer gwụchara ma mee ka mmiri dị jụụ, a ga-eweghachi ya na mgbakọ ọhụrụ ahụ. 2. Tupu ọrụ steamer, a ga-ewepụ plọg fusible na ala nke valvụ subsea. Mgbe ...
Elu nke igwe anaghị agba nchara na-ajari?
site ha na 20-05-02
Gịnị bụ igwe anaghị agba nchara? Na nghọta nke ọtụtụ ndị mmadụ, "igwe anaghị agba nchara" bụ nchara nke na-agaghị ata nchara, mana ọtụtụ ndị ahịa na-emepụta ebe nchara mgbe nchara nchara nchara (ntụpọ) pụtara n'elu valvụ igwe anaghị agba nchara. Gịnị bụ ihe kpatara ya? Igwe anaghị agba nchara valves nwere abilit ...
site ha na 19-09-25
Ma egbe mmanụ ụgbọ ala nke ụgbọ ala mmanụ ahụ nwere ike ijide onwe ya dabere na ma ụlọ ọkụ nwere ike ịmebe agụụ zuru oke. Ya mere, mgbe egbe mmanụ na-agbanye mmanụ enweghị ike ijide onwe ya, ekwesịrị idozi ya dịka echiche ndị a: 1. Lelee ma akara ahụ na nkwonkwo n'etiti ba ...